BBC Algeria: Ganacsade dalka lacag kala baxayey oo lagu qabtay xadka Tunisia | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Algeria: Ganacsade dalka lacag kala baxayey oo lagu qabtay xadka...
BBC Algeria: Ganacsade dalka lacag kala baxayey oo lagu qabtay xadka Tunisia
Nin ganacsade ah oo magac ku leh dalka Algeria ayaa isaga oo doonaya inuu ka tallaabo xadka dalkaasi la leeyahay Tunisia la qabtay, sidaana waxa tebisay warbaahinta maxalliga ah.
Cali Xaddaad waxa uu ka mid yahay ragga ugu hodansan dalka isla markaana muddo dheer taageerayey Madaxweyne Cabdelcasiis Bouteflika, oo haatan cadaadis weyn lagu saarayo in uu xilka ka dego.
Dadka mudaharaadaya ayaa waxay dalbanayeen in Bouteflika uu xilka ka dego.
Salaasadii ayaa taliyaha milatariga ee awoodda badan, Jeneraal Axmed Qaa’id Salaax, waxa uu ku tirtirsiyey madaxweynaha bukaanka ah inuu is casilo.
Warbaahinta Algeria waxay sheegtay in Xaddaad oo 54 jir ah, isla markaana haysta baasaboor Ingiriis ahi uu sitay lacag badan markii la qabtay isaga oo doonaya inuu soohdinta kaga tallaabo baabuur, aroornimadii hore ee maalintii Axaddii.
Sababta xadhigiisaa la sheegay ayaan ilaa haatan caddayn, hase yeeshee Xaddaad waxa uu dhawaan iska casilay madaxtinimada ururka ay leeyihiin dadka loo shaqeeyo ee Algeria oo magaciisa loo soo gaabiyo FCE.
Waxa uu ganacsiga ka bilaabay maamulka hudheel yar oo qoyskoodu lahaa ilaa uu noqday nin leh ganacsi aad u ballaadhan oo ku jira dhismaha, Isboortiga, warbaahinta iyo isbitaallada.
Dadka lafa gura siyaasadda dalkaas ayaa sheegaya inuu ka mid ahaa dadka ugu dhaw dhaw Bouteflika.
Intii uu madaxa ka ahaa FCE waxa uu taageeray damacii madaxweynaha ee ahaa inuu mar shanaan isku sharraxo madaxtinimada, inkasta oo uu markii dambe go’aankaa ka noqday markii sumcaddiisu hoos u dhacday.
Tan iyo markii uu Bouteflika shaaciyey inuu damacsanyahay inuu ka qayb galo tartanka doorashada la qabanayo bisha dame, Algeria waxa todobaaddaba ka taagnaa mudaharaadyo lagaga soo horjeedo xukuumadda.
Hogaamiyahan 82 jirka ah ayaa talada dalkaa hayey ilaa 1999, hase yeeshee haatan waa uu ka noqday damaciisii ahaa inuu is sharraxo, weli se isagaa talada haya.
Marar dhif iyo naadir ah ayaa lagu arkay fagaarayaasha tan iyo markii uu ku dhacay cudurka faaligu sanadkii 2013-kii.
Previous articleDaawo Muuqaal:-Xukuumada Oo Digniin U Dirtay Hay’addaha +Ganacsatada Isticmaasha Raadiyaha Isgaadhsiinta iyo Sadex Shirkadood oo Ruqsada lagala Noqday
Next articleXildhibaanadda Golaha Wakiiladda Oo Xukuumadda Uga Digay Qorshaha Ay Ganacsadaha Ku Dhiibayso.